Tibbana – Page 8 – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2015-04-14 09:31:582018-10-26 09:21:20Du'aa Ka'uu
February 26, 2015 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
February 14, 2015 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Yaa’iin waliigalaa kun agayya 24 kadhannaa abbootiitiin banameera. Sagantaa kana irratti barumsi wangeelaa erga kennamee booda raawwiin karoora waggaa lamaa dura taa’aa Waldaa Qulqullootaa Luba Doktar Sammuu Mitikkuutiin dhiyaateera. Itti fufuunis gabaasni Odiitii odiitara alaatiin dhiyaatee booda mana keessaa raawwii karooraa fi gabaasa odiitii dhiyaate irratti kennaneera. Guyyuma kana sa’aatii booda Gabaasni Inispeekshinii Obbo Yeshiiwaas Maammootiin manaaf dhiyaatee gabaasota dhiyaatan irrattis mariin bal’aan taassifameera. Mannis marii erga taassisee booda gabaasa dhiyaatee fi hojiiwwan raawwataman hunda sagalee guutuudhaan mirkaneesseera.
Dabalataanis qophii yaa’ii Waliigalaa waldaa qulqullootaa fi sirna filannoo gaggeessitoota waldaa kanaa ilaalchisee qajeelfamni fooyya’e dhiyaateera. Mannis qajeelfama fooyya’ee dhiyaate kana irratti mari’atee kallattii hojii gaggeessitootaaf kennee jira.
Yaa’iin kun hagayya 25 kan itti fufe yoo ta’u, karoora yaa’ii mooraa, ilaalchisee qajeelfamni haaraa qoratamee dhiyaateera. Mannis qajeelfama kana irratti marii bal’aa gaggeessee kallattii barbaachisaa kennee jira. Dabalataanis karoora Waldaa qulqullootaa irrattis marii bal’aan erga taassifamee booda kallattiin hojii hirmaattota irraa hojii gaggeessitootaaf kennamee jira.
Guyyaa kana Dursaa Phaaphaasii Harargee fi baha Itiyoophiyaa kan ta’an Abuna Salaamaan argamanii gorsaa fi eebba kennaniiru. Yaa’iin kun hagayya 25 kan raawwate yoo ta’u Yaa’ii kana irratti namootni 650 ol ta’an hirmaataniiru.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2014-09-08 18:47:062018-10-26 09:21:24Yaa'ii Waliigalaa
Dn. Tolasaan sababa badhaasa kana Waldaa qulqullootaatiif kenne yemmu ibsu “ Jalqaba Yemmuun Yuunivarsitii seenu Sagantaa Yaa’ii Mooraatiin ‘baga nagaan dhuftani’ jechuuf mana kiristaanaatti qophaa’e irratti argameen ture sagantaa kanarrattis baruullee ‘’ gubaa’ee qaanaa” jedhamtu biteen yemmuun dubbisu barataa Yuunivarsitii Jimmaa kan ture Dr.Dn Ingidaa kan jedhamu badhaasa Meedaaliyaa Yuunivarsitii irraa argate Mana kiristaanaatiif akka kenne galmaa’ee argeen anis akka isaa cimee baradheen Meedaaliyaa fudhadhee Mana kiristaanaa na guddisteef kennuun qaba jedheen Murteeffadhe ture; Waaqayyoof galanni haa gahu meedaaliyaa fi geeba kaasuu danda’eera! Kan anaa fi Dn. Dr.Ingidaa Yaadaan Wal nubarsiise Waldaa Qulqullootaati: akkan cimee baradhuuf kan na kakaase Waldaa qulqullootaati Waan ta’eef Geebni kun isaaf mala jedheen kenneef ; dabalataanis kana gochuun koo umurii koo guutuu mana Kiristaanaa akkan tajaajiluuf waan na jajjabeessuuf raawwadheera” jedheera.
Kennaa kana kan Dn. Tolasaa irraa fuudhee Waldaa Qulqullootaatti kenne Yuunivarsitii Finfinneetti Barsiisaa seeraa kan ta’e Profeesar Xilaahun Tashoomaa yaada kennaniin ‘’ seenaa Yuunivarsitootaa keessatti qabxii akka kanaa namoonni galmeessan muraasadha! Carraa yeroo tokko argamu kana ammo dabarsanii kennuun wareegamummaadha! Ani mucaa kana irraa barumsa baay’ee argadheen jera; baay’ees na gammachiiseera” jedhaniiru. Waldaa qulqullootaa bakka bu’uudhaan kennaa kana kan fuudhan Luba Doktar Sammuu Mitikkuu yoo ta’n ; kuni adaraa guddaadha! Cimnee akka hojjennuufis nu jajjabeessa! Waldaa kana bakka bu’uudhaan kennaa kana yemmuun fudhu Waaqayyo galateeffachaarradha jedheera. Meedaaliyaa Mana kiristaanaa Daabbus Madaanaalamiitiif akka kennuuf kan bakka bu’uun fuudhe dura taa’aa Wiirtuu Gimbiiti.Dn. Tolasaa Wajjin turtii dheeraa kan taassifne yoo ta’u Gabaasa bal’aa Gaazexaa gara fuulduraatti afaan Oromootiin maxxansinu irratti dhiyeessina.